Ejypta: Hetsi-bahoaka Avotsory Kareem Sy Izay Nosoratan’i Kareem · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 20:40 GMT
Nisy ny antso ho amin'ny famoriam-bahoaka fanindroany mba hanery ny governemanta Ejypsiana hamotsotra ilay bilaogera nogadraina Abdulkareem Nabeel Sulaiman, 22 taona, mpianatry ny Oniversite Al Azhar taloha, izay voaheloka higadra efa-taona noho ny lahatsoratra navoakany tamin'ny aterineto.
Tamin'ny 22 Febroary, nomelohin'ny fitsarana Alexandria izy noho ny fanevatevana ny Silamo sy ny filoha Ejypsiana Hosni Mubarak. Nohamafisina tamin'ny 12 Martsa ny didim-pitsarana, niteraka tabataba teo amin'ny tontolon'ny bilaogy iraisam-pirenena ary koa antso fitakian'ireo mpikatroka ny zon'olombelona mba hamotsotra tsy misy hatak'andro an'ilay bilaogera nogadraina. Nisy ihany koa ny antso hisian'ny sazy henjana mba hiantohana fa tsy hanaraka ny dian'i Kareem ireo bilaogera hafa. Ohatra, mbola mihantona ny fitoriana sivily napetrak'ireo mpisolovava 22 izay te hanasazy an'i Kareem noho ny ‘fanevatevana ny Silamo’.
Mitohy ny Fanentanana Famotsorana an'i Kareem
Saingy tsy hanakana ny sain'ireo mpanao fanentanana hitolona hamotsotra an'i Kareem izany:
“The Free Kareem Coalition has been contacting individuals around the world who have expressed interest in holding rallies next month at Egyptian Embassies and Consulates in their country of residence.
Any form of support from you, be it your presence in the rally, promoting it, or organizing one in your area, would be a great boost to our cause to free Kareem Amer,” wrote his supporters here.
“Nifandray tamin'ireo olona manerantany izay liana hanao famoriam-bahoaka amin'ny volana ambony ao amin'ny Ambasady sy Konsilà Ejypsiana ao amin'ny firenena misy azy ireo ny Firasaimbe ho Famotsorana an'i Kareem.
Mino izahay fa ny olona tsirairay tia fahalalahana dia mila maneho ny heviny mba ho ren'izao tontolo izao. Nezahina hotontosaina amin'ny Zoma, 27 Aprily 2007 ny datin'ny fihetsiketsehana manerantany.
Ny endrika fanohanana rehetra avy aminao, na ny fanatrehanao ny famoriam-bahoaka, na ny fampiroboroboana izany, na fikarakarana izany ao amin'ny faritra misy anao dia hampiroborobo indrindra ny hetsika ataontsika mba hamotsorana an'i Kareem Amer,” hoy ny mpanohana azy nanoratra teto.
Inona No Nosoratan'i Kareem
Maro aminareo no mety manontany momba izay nosoratan'i Kareem. Momba ny inona izany? Azo jerena ato ny lahatsoratr'i Kareem, izay nitarika ny fahoriany. Haingana avy hatrany ireo mpanohana azy nanoratra hoe:
“FANAMARIHANA: Ireo mpamorona ny hetsika Avotsory i Kareem dia te hanoritra fa tsy mankasitraka ny votoatin'ity lahatsoratra ity izy ireo,” indrindra indrindra fa mikasika ity lahatsoratra ity.